Fankalazana ny fetin’ny fahaleovan-tena Haverina ireo tsipika eny amin’ny arabe
Ho fiatrehana ny fankalazana ny fetin’ny fahaleovan-tena, dia hisy ny asa famerenana ireo tsipika mandray ny faritra Carrefour Anosy,
Vokatry ny savorovoro tao Toamasina : Nahemotra amin’ny 2 ora ny fara-fodiana !
Raha tsiahivina dia nisy fisavorovorona nitranga tao Toamasina, ny alarobia hariva teo, rehefa nisy tovolahy iray voalaza fa maty, vokatry ny daroky ny mpitandro ny filaminana. Naneho ny heviny manoloana izany moa ny pôlisim-pirenena ary nametraka fepetra vaovao ny avy eo amin’ny fiadidian’ ny faritra Atsinanana.
« Brigade anti-piratage » : Nahazo mpandrindra nasionaly vaovao
Tontosa omaly maraina tetsy amin’ny Ministeran’ny Serasera sy ny Kolontsaina Anosy ny fifamindrana andraikitra teo amin’ny mpandrindra nasionalin’ny «Brigade anti-piratage » teo aloha, ny General de division MAKA Herman,
Seha-pihariana Lany ny lalàna mifehy ny vokatra biolojika
Nolanian’ireo solombavam-bahoaka ny talata 12 mai lasa teo teny amin’ny CCI Ivato ny volavolan-dalàna laharana faha-010/2019 tamin'ny 28 novambra 2019, izay mifehy ny famokarana biolojika eto Madagasikara.
FANAFIHANA TAO FENERIVE-EST : Fianakaviana ihany no nanao azy
Olona miisa 04 ahitana lehilahy 02 sy vehivavy 02 no voasambotry ny polisy miasa ao Analanjirofo izay isan'ny nandray anjara tamin'ny fanafihana mitam-piadiana niseho tao amin'ny fokontany Ambodihazinina kaominina Ambatoharanana Distrikan’i Fenerive-Est ny 05 May nifoha 06 May lasa teo.
Tanjondava Talatamaty Nahazo EPP vaovao
Anisan’ireo Fokontany 12 be olona sahirana indrindra ny Fokontany Tanjondava ao anatin’ ny kaominina Talatamaty, distrikan’Ambohidratrimo.
Mpianatra hanala fanadinana Nampitoviana ny fandaharam-potoana isaky ny sokajy
Nizotra araka ny tokony ho izy ny fampidirana ny mpianatra hanala fanadinana tany amin'ny Faritra toy ny tany Matsitra Ambony , Antsiranana, Diego,
Voankazo matavy ny zavoka. Ny tena mahatsara azy dia izy mampihena ny tahan’ny menaka ao anatin’ny rà, indrindra ny “cholesterol”. Ireo akora hafa toy ny persily, oliva, patsa be kosa no mitondra ny otrikaina sy vitamina. Feno fer ihany koa ity sakafo ity ary amorain’ny vitamina C ny fandraisan’ny vatana izany fer izany. Mampihena ny tahan’ny menaka ratsy (cholestérol sy triglycéride) ao anatin’ny rà, araka izany ity sakafo ity.
Isaorana Rakotohery Josette
Nutritionniste spécialiste en maladies métaboliques